The Darkest Minds (2018) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
မွို့တဈမွို့မှာ ကလေးတှေ အကွောငျးရငျးမရှိ အရုပျကွိုးပွတျလဲကသြဆေုံးရာကနေ ဒီဇာတျလမျးဟာ စတငျပါတယျ…ရောဂါရှာမရ ဘာကွောငျ့ရယျမှနျးမသိ သဆေုံးသှားတဲ့ကလေးအရအေတှကျဟာမြားသထကျမြားလာပမေယျ့တဈဖကျမှာတော့အသကျရှငျကနျြခဲ့တဲ့ကလေးတှလေဲရှိနပေါသေးတယျ။မိဘမြားရဲ့ပူဆှေးသောကတှကေိုလဈြလြူရှုပွီး အစိုးရကအာရုံစိုကျတာကတော့ရှငျကနျြခဲ့တဲ့ကလေးတှရေဲ့ခံနိုငျရညျနဲ့ ထူးခွားတဲ့စှမျးရညျတှကေိုပါပဲ။
ရှငျကနျြခဲ့တဲ့ကလေးတှမှော စှမျးရညျတှရှေိတယျလို့ အစိုးရကသိပွီးတဲ့နောကျကလေးတှကေို ကုသကာကှယျဆေးပေးခနျး အမညျခံအကဉျြးစခနျးတှမှောဖမျးဆီးခြုပျနှောငျထားပါတော့တယျ။ဒီအကဉျြးစခနျးကို အသကျ၁၀နှဈပွညျ့မှေးနပွေီ့းနောကျတဈရကျမှာပဲအဖမျးဆီးခံလိုကျရတဲ့ ကလေးလေးနာမညျကတော့ ရူဘီ ဒလေီပါပဲ။
သူမတူရှားပါးလှတဲ့ စှမျးရညျကိုပိုငျဆိုငျထားပွီး အစှမျးကွီးမားသူဆိုရငျသတျပဈတဲ့အကဉျြးစခနျးမှာ သူဘယျလိုရုနျးကနျအသကျရှငျမလဲ?အဲ့ဒီစခနျးကနထှေကျပွေးဖို့ကွိုးစားပမေယျ့ အောငျမွငျပါ့မလား?အကဉျြးစခနျးမှာလဲ ကလေးတှခြေုပျနှောငျခံထားရပမေယျ့အပွငျလောကမှာရောဘာတှဖွေဈပကျြကုနျပွီလဲ?အသကျငယျငယျရူဘီလေး ဒီအခကျအခဲတှကေိုသူမရဲ့သူမတူတဲ့စှမျးရညျတှနေဲ့ကြျောဖွတျလို့ရောအောငျမွငျနိုငျပါ့မလား? ဆိုတာစိတျဝငျတစားဇာတျလမျးရဲ့အဟုနျမှာလိုကျပါစီးမြောအဖွရှောကွညျ့ပါ။ဒီလို စှမျးအားတှပေိုငျဆိုငျထားတဲ့လူငယျလေးတှတေဈယောကျဆီမှာကိုယျပိုငျအဆငျ့သတျမှတျခကျြဆိုတာရှိပါတယျ….
အဲဒါတှကေတော့ အပွာရောငျ အစိမျးရောငျ အဝါရောငျဟာသာမာနျစှမျးအားသာရှိကွပွီးတော့ အနီရောငျနဲ့လိမ်မျောရောငျကတော့ရှားပါးလှနျးတဲ့ စှမျးအားမြိုးဖွဈပွီးတော့ အန်တရာယျအရှိဆုံးသတျမှတျခကျြတှဖွေဈပါတယျ..ဒါပမေယျ့ ရူဘီလေးကတော့ လိမ်မျောရောငျအစှမျးကိုပိုငျဆိုငျထားသူပဲဖွဈပါတယျ…ဒီကားဟာ X Men ကားနဲ့ဆငျတူပုံစံဖွဈပွီးတော့စှမျးအားရှငျကလေးငယျတှရေဲ့အစှမျးတှကေိုလညျးစိတျဝငျစားဖှယျမွငျရမှာဖွဈပွီးတော့ဇာတျလမျးပွီးတဲ့အထိ မငွီးမငှကွေ့ညျ့ရှုရမှာတော့အာမခံပါတယျ။
သဲထိတျရငျဖို ဇာတျလမျးဆနျးဆနျးလေးတှကေိုကွိုကျနှဈသကျတတျတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျကတော့ အကွိုကျဖွဈစမှောပါ။ဇာတျလမျးကိုပေါ့သှားမှာစိုးရိမျကာ အညှနျးကိုတတျနိုငျသမြှအကဉျြးခြုံးထားတဲ့အတှကျ အညှနျးဖတျကွညျ့ရုံနဲ့မသိနိုငျတဲ့ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတှကေိုဒေါငျးလော့ဆှဲကွညျ့ရှုနိုငျဖို့အတှကျ The Darkest Minds (2018)ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။
မြို့တစ်မြို့မှာ ကလေးတွေ အကြောင်းရင်းမရှိ အရုပ်ကြိုးပြတ်လဲကျသေဆုံးရာကနေ ဒီဇာတ်လမ်းဟာ စတင်ပါတယ်…ရောဂါရှာမရ ဘာကြောင့်ရယ်မှန်းမသိ သေဆုံးသွားတဲ့ကလေးအရေအတွက်ဟာများသထက်များလာပေမယ့်တစ်ဖက်မှာတော့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေလဲရှိနေပါသေးတယ်။မိဘများရဲ့ပူဆွေးသောကတွေကိုလျစ်လျူရှုပြီး အစိုးရကအာရုံစိုက်တာကတော့ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေရဲ့ခံနိုင်ရည်နဲ့ ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပါပဲ။
ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေမှာ စွမ်းရည်တွေရှိတယ်လို့ အစိုးရကသိပြီးတဲ့နောက်ကလေးတွေကို ကုသကာကွယ်ဆေးပေးခန်း အမည်ခံအကျဉ်းစခန်းတွေမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားပါတော့တယ်။ဒီအကျဉ်းစခန်းကို အသက်၁၀နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲအဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့ ကလေးလေးနာမည်ကတော့ ရူဘီ ဒေလီပါပဲ။
သူမတူရှားပါးလှတဲ့ စွမ်းရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အစွမ်းကြီးမားသူဆိုရင်သတ်ပစ်တဲ့အကျဉ်းစခန်းမှာ သူဘယ်လိုရုန်းကန်အသက်ရှင်မလဲ?အဲ့ဒီစခန်းကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမယ့် အောင်မြင်ပါ့မလား?အကျဉ်းစခန်းမှာလဲ ကလေးတွေချုပ်နှောင်ခံထားရပေမယ့်အပြင်လောကမှာရောဘာတွေဖြစ်ပျက်ကုန်ပြီလဲ?အသက်ငယ်ငယ်ရူဘီလေး ဒီအခက်အခဲတွေကိုသူမရဲ့သူမတူတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ကျော်ဖြတ်လို့ရောအောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား? ဆိုတာစိတ်ဝင်တစားဇာတ်လမ်းရဲ့အဟုန်မှာလိုက်ပါစီးမျောအဖြေရှာကြည့်ပါ။ဒီလို စွမ်းအားတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူငယ်လေးတွေတစ်ယောက်ဆီမှာကိုယ်ပိုင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်….
အဲဒါတွေကတော့ အပြာရောင် အစိမ်းရောင် အဝါရောင်ဟာသာမာန်စွမ်းအားသာရှိကြပြီးတော့ အနီရောင်နဲ့လိမ္မော်ရောင်ကတော့ရှားပါးလွန်းတဲ့ စွမ်းအားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ အန္တရာယ်အရှိဆုံးသတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်..ဒါပေမယ့် ရူဘီလေးကတော့ လိမ္မော်ရောင်အစွမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်…ဒီကားဟာ X Men ကားနဲ့ဆင်တူပုံစံဖြစ်ပြီးတော့စွမ်းအားရှင်ကလေးငယ်တွေရဲ့အစွမ်းတွေကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်မြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇာတ်လမ်းပြီးတဲ့အထိ မငြီးမငွေ့ကြည့်ရှုရမှာတော့အာမခံပါတယ်။
သဲထိတ်ရင်ဖို ဇာတ်လမ်းဆန်းဆန်းလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ အကြိုက်ဖြစ်စေမှာပါ။ဇာတ်လမ်းကိုပေါ့သွားမှာစိုးရိမ်ကာ အညွှန်းကိုတတ်နိုင်သမျှအကျဉ်းချုံးထားတဲ့အတွက် အညွှန်းဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့မသိနိုင်တဲ့ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကိုဒေါင်းလော့ဆွဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် The Darkest Minds (2018)ဆိုတဲ့ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Option 1 server.mfile.cloud 490 MB SD (480p)
Option2storage.msubmovie.com 490 MB SD (480p)
Option3yuudrive.me 490 MB SD (480p)
Option4sharer.pw 490 MB SD (480p)